Maka: isihloko | Martech Zone
Qalisa Ukuhlolwa kwe-A / B Ngalezi Zinto Ezi-7
NgoMgqibelo, Juni 13, 2015 Douglas Karr
Ukuhlola kuyaqhubeka nokufakazelwa njengenye yezindlela eziphezulu zanoma yiliphi ibhizinisi ukukhulisa ukubukwa, ukuchofoza nokuguqulwa kuwebhusayithi yabo. Ukwakha isu lokuhlola lamakhasi okufika, ukubizelwa ezenzweni, ne-imeyili kufanele kube kumashejuli wakho wokumaketha. Izindaba ezimnandi? Cishe noma yini ingahlolwa ukusebenziseka! Izindaba ezimbi? Cishe noma yini ingahlolwa ukusebenziseka. Kepha i-infographic yethu entsha ikukhombisa izindawo ezimbalwa ezinhle ongaqala ngazo. Ukugxumela ku-A / B
Izithako eziyi-11 ezibalulekile kuBhulogi Eliphoqelela Iposi
NgoLwesibili, Januwari 7, 2014 NgoLwesihlanu, Novemba 6, 2020 Douglas Karr
Okunye okuqukethwe okuhle kakhulu ozokuthola kuwebhu kwenzeka lapho ukwazi ukuthatha inqubo eyinkimbinkimbi futhi ukwenze lula. I-Copyblogger ikwenzile lokho nale infographic ekubhaleni okuthunyelwe kwebhulogi. Zonke izici zeseluleko ukucwenga nokupholisha okuthunyelwe ukuthola nokugcina abafundi. Kukhona ukhiye ngaphambi nangemva kwalokho, futhi… Ngaphambi - bhala ibhulogi yakho kwipulatifomu elungiselelwe kahle ejabulisa kahle, ekhuthaza ukwabelana ngayo, futhi inikeze